OBS 26.1.1 yatotibvumidza kutora iyo skrini mune Wayland zvikamu | Linux Vakapindwa muropa
OBS 26.1.1 inogonesa mukana wekutora iyo skrini mumasangano eWayland natively
Ndiri munhu asingade shanduko. Pandinoda chimwe chinhu, ndingada kuchishandisa chero pakagadzika. Kurekodha chidzitiro chePC ini ndiri mushandisi anofara weSystemScreenRecorder, asi izvo hazvisi muWindows (kana mu macOS), saka mu "windows" ndakafanirwa kuwana hupenyu hwangu zvishoma uye ndiri neVokoscreenNG. Asi iyi software inotibvumidza kunyora chinovhara pasina mafrills kana matambudziko, akasiyana zvakanyanya kubva kune mamwe akadai OBS Studio izvo zvakare zvinotibvumidza kutepfenyura zviripo.
Kune zvakanaka nezvakaipa, Linux yakasiyana zvakanyanya ne macOS neWindows. Pane zvakawanda zvingasarudzwa, senge akasiyana odhiyo nemavhidhiyo maseva, uye yazvino vhezheni yeiyi "Kudzidza" yaunza ruzivo mune izvi: OBS Studio 26.1.1 iwe unogona ikozvino kurekodha Wayland zvikamu. Iko mukana unowanikwa kubva munaKurume 30, kana zvirinani natively uye nerutsigiro ruzere.
OBS Studio 26.1 inosvika ine chaiyo kamera rutsigiro, OpenBSD uye nezvimwe
OBS Studio 26.1.1 ikozvino inowanikwa neWindows, macOS uye Linux
Sezvavanotsanangura, nzira yekuzadzisa iyi feat yanga isiri pfupi kana nyore, asi zvese zvave nyore nerutsigiro rwemunharaunda. Ivo zvakare vanotaura kuti akawanda uye akakosha macomputer ari kuwedzera rutsigiro rweWayland, senge GNOME kana KDE, zvakanyanya zvekuti vekupedzisira vari kushanda kuti vaisanganise seyakagadziriswa sarudzo.
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti chirongwa ichi chinodaro zvese zvakagadzirira kushanda zvirinani mukati iyo Flatpak vhezheni. Kunyangwe vamwe vachifunga kuti zvese zvakangofanana nezviri mune zvinyorwa zvekuchengetedza, chokwadi ndechekuti hazvisi. Muchokwadi, uye semuenzaniso, GNOME Repository Mabhokisi anotibvumidza isu kuwedzera ekunze madhiraivha uye Flatpak haina, nepo Flatpak inogona kumhanyisa GNOME OS isina matambudziko uye zvinyorwa zvinokundikana (uye hazvibvumidze kubvisa bhokisi kana risiri nemurairo).
Chero zvazvingaitika, iyi iri rakakosha danho ratorwa kutarira kumberi uye ikozvino vazhinji vanhu vazhinji uye mune dzakawanda zvimwe zviitiko vachakwanisa kushandisa OBS Studio.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » OBS 26.1.1 inogonesa mukana wekutora iyo skrini mumasangano eWayland natively
GNOME 41 inoshandisa libadwaita kuita kuti interface iratidzike zvirinani kana uchishandisa GNOME Apps
GTK 4.2.0 inouya nekuvandudzwa kwekuita, kwekupa, Meson uye nezvimwe